व्यवसायका लागि वालमार्टका १० नियमहरु | Yopoho Directory
व्यवसायका लागि वालमार्टका १० नियमहरु
सानो छँदा दूध बेच्ने,पत्रिका बेच्ने र होटलमा काम गर्ने मान्छे ठूलो भएर के बन्न सक्छ ? यस्तो प्रश्नको उत्तरमा मानिसहरुले मुख खुम्च्याउन सक्छन् । तर त्यस्तो व्यक्तिको पनि संभावना उच्च हुन्छ, उनीहरु एउटा कम्पनीको मालिक बन्न सक्छन् । वा संसारको घनाढ्य व्यक्ति मध्येको एक बन्न सक्छन् । त्यस्तै व्यक्तिहरु मध्येका एक हुन् वालमार्टको स्थापना गर्ने व्यक्ति सैम वाल्टन । उनलाई आधुनिक रिटेलको जनक पनि भनिन्छ । आज तिनले बनाएको रोडम्याममै हिडेर थुप्रै कम्पनीहरु सफल भएका छन् । वालमार्ट १९८२–१८८ सम्मका सबैभन्दा धनी व्यक्ति थिए । उनले व्यवसाय सम्बन्धि केही नियमहरु बताएका थिए । ति यस प्रकार छन् ।
आफ्नो व्यवसायमा समर्पित हुनुहोस्
हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो व्यवसायमा अरु भन्दा बढी विश्वास हुनुपर्छ । यदि कुनै व्यक्तिमा आफ्नो काम प्रति बढी लगाव छ भने उ भित्र जस्तो सुकै अवगुण भए पनि उ सफल हुन्छ केवल उसमा धैर्यता हुनुपर्छ । मानिसमा जन्म देखि नै धैर्यता हुँदैन । यसको विकास गर्दै लानु पर्छ । यसको आवश्यकता हरेक मोडमा पर्छ । यदि कोही आफ्नो कामलाई माया गर्छ भने उ हरेक दिन त्यसलाई सफल बनाउने प्रयास गर्छ भने उ हरेक दिन त्यसलार्य सफल बनाउने प्रयास गर्छ । चाँडै नै सहकर्मीहरुले सरुवा रोग जस्तै तपाईको गुण आफूमा सार्नेछन् ।
कर्मचारीलाई पार्टनर जस्तै व्यवाहार गर्नुहोस्
यदि तपाई कर्मचारीलाई पार्टनर जस्तै व्यवाहार गर्नुहुन्छ भने उनीहरुले पनि तपाईलाई त्यस्तै सोच्नेछन् र तपाईले जति नै कम्पनीको हितको बारेमा सोच्नेछन् । तर आफ्नो नियंत्रणलाई कायमै राख्नुपर्छ । आफ्नो कर्मचारीलाई नाफाको केहि अंश बाँड्नुहोस् । यसबाट हरेक कर्मचारी कम्पनीलाई नाफामुखी बनाउन अग्रसर हुनेछन् । यो वालमार्ट कम्पनीको सबैभन्दा ठूलो खोज हो ।
पार्टनरलाई मोटीभेट गर्नुहोस्
मात्र पैसा र सम्मानले व्यवसाय अगाडी बढ्दैन । हरेक दिन आफ्ना सहकर्मीलाई मोटिभेट गर्न विभिन्न नयाँ रणनीतिहरु ल्याईरहनु पर्छ जस्तैः ठूलो लक्ष्य निर्धारण, कम्पिटिशनमा वृद्धि एउटाको नियंत्रण अर्कोको हातमा र सँधै राम्रो काम गर्न उत्साहित गर्नुपर्छ ।
सहकर्मीमा सूचनाको संचार
सहकर्मीमा चुस्त सूचनाको संचारले उनीहरुले उद्देश्य राम्रो सँग बुझी बढी सक्रिय हुनेछन् । सूचना एउटा शक्ति हो । आफ्नो सहकर्मी सँग कुनै कुराहरु लुकाउनु आफ्नो प्रतिस्पर्धीबाट हुने नोक्सान भन्दा ठूलो हुन्छ ।
कर्मचारीहरुको प्रशंसा गर्नुहोस्
तलब र मूनाफा दिदा उनीहरु इमान्दार हुन्छन् तर पनि सबै व्यक्तिहरु आफ्नो प्रशंसा सुन्न चाहन्छन् । विशेष गरी त्यसबेला जब व्यवसाय सफल भईरहेको हुन्छ । सही समयमा सही शब्दहरु द्धारा गरिएको साँचो प्रशंसाको कुनै विकल्प हुँदैन । प्रशंसा निःशुल्क हुन्छ तर यसको महत्व मूल्यवान हुन्छ ।
सफलतालाई सेलिब्रेट गर्नुहोस्
यदि तपाई असफल हुनु भयो भने त्यसको कारण खोज्नुहोस् तर त्यसलाई गम्भिरता पूर्वक नलिनुहोस् । जब तपाई तनाव मुक्त हुनुहुनेछ । तपाई सँगका व्यक्तिले पनि हलुका महसूस गर्नेछन् । जब तपाई उत्साहित हुनुहुनेछ । उनीहरु पनि उत्साहित हुनेछन् । त्यसकारण आफ्नो सफलतालाई खुशी साथ सबै सँग मनाउनुहोस् । जसबाट उनीहरु पनि उत्साहित होऊन् ।
हरेकको कुरा सुन्नुहोस्
जो अगाडी हुन्छ वा जसले ग्राहक सँग डील गर्छ, उसले मात्र त्यहाँ के हुँदैछ भन्ने कुरा थाहा पाउँछ । त्यसकारण उसलाई के थाहा छ त्यो जान्ने प्रयास गर्नुपर्छ । यो सबैभन्दा ठूलो गुण हो । आफ्ना संस्थामा नयाँ रणनीति ल्याउनु अघि आफ्नो सहकर्मी तथा कर्मचारी हरेकको कुरा सुन्नु पर्छ र तिनको सल्लाह लिनुपर्छ ।
आफ्ना ग्राहकलाई सोचे भन्दा बढी दिनुहोस्
यदि आफ्ना ग्राहकलाई केही बढी दिने हो भने उनीहरु बारम्बार आउनेछन् । ग्राहकहरुको संतुष्टिको पूर्ण रुपमा ख्याल राख्नुपर्छ । वालमार्टको चिन्ह मुनि क्बतष्काबअतष्यल न्गबचबलतभभम भनेर लेखिएको थियो र यसको निकै ठूलो प्रभाव ग्राहकमा परेको थियो ।
संस्थाको अनावश्यक खर्चलाई नियन्त्रण गरी बढी फाइदा लिन सकिन्छ । वालमार्ट देशको सबैभन्दा ठूलो रिटेलर बन्नु अघि बिक्री सम्बन्धी कम खर्चको रेसियोमा नं. १ रहेको थियो ।
परम्परागत प्रणालीलाई छोड्नहोस्
यदि हरेक व्यक्ति कामलाई एउटै पद्धतिबाट गरिरहेको छ भने चाँडै नै त्यसबाट हुने मुनाफा सीमित हुन पुग्छ । त्यसकारण सँधै एकनासको प्रणाली लिएर हिड्नुको सट्टा त्यसमा नयाँपन ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ ।
Next: भिटामीनहरुको भण्डार मेवा